Kempo : «taranja voafehin’ny Malagasy», hoy i La Rocca | NewsMada
Kempo : «taranja voafehin’ny Malagasy», hoy i La Rocca
Anisan’ny taranja vaovao, saingy efa mahazo vahana eto Madagasikara ny Kempo. Nanamarika i Eric La Rocca, tomponandraikitry ny federasiona iraisam-pirenena fa voafehin’ny Malagasy tsara ny taranja. Resadresaka…
Gazety Taratra (*) : Inona ny anton’ilay fiofanana nomenao ny 28 febroary – 1 marsa lasa teo?
Eric La Rocca (-) : Ny tena marina, nijery ny fivoaran’ny atleta malagasy ny anton-diako ary nanararaotra nanome izay tsy ampy fotsiny. Efa eo mantsy i Parfait, izay nanome sy nanazatra ireo atleta malagasy, hatramin’izay. Na izany aza, nosokafana ho an’ny olon-drehetra liana izany nanomboka tany amin’ny ankizy ka hatramin’ny olon-dehibe sy ireo izay te hahafantatra ny Kempo.
*: Ahoana ny fahitanao ny Malagasy sy ny taranja kempo?
-: Sahiko ny milaza fa tena taranja voafehin’ny Malagasy ny Kempo. Manan-talenta izy ireo ary mendrika ny hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, hatao any Budapest, amin’ny faran’ny volana avrily ho avy izao.
*: Raha ny fahitanao azy, ho zakan’ny Malagasy ve ny hiatrika izany?
-: Tsy any amin’ny hoe : zaka ve sa tsy zaka fa ny fandraisana anjara aloha dia efa zava-dehibe. Manana tombony foana ny olona miatrika fifaninanana iraisam-pirenena. Amiko, manana ny toerany ny Malagasy, afaka telo na efa-taona raha tena mifofotra sy miasa tsara ny teknisianina.
*: Inona ny votoatin’ny fihaonanao, tamin’ny minisitra sy ny talen’ny fanatanjahantena federaly?
-: Fitsidihana ara-pomba ofisialy aloha ny voalohany. Tamin’izany koa no niresahana tamin’izy ireo, ny amin’ny hananganana ny federasiona malagasin’ny Kempo. Efa nanaiky, izy ireo ary eo am-pikarakarana ny taratasy sisa ny komisiona malagasin’ny kempo sy ny haiady mitambatra (CKM-AMM). Mino isika fa hivelatra sy hiroborobo ity taranja ity, rehefa tafatsangana ny federasiona malagasin’ny kempo.